China 1,2-diaminobenzene CAS: 95-54-5 ndị ​​na-emepụta ihe na ndị na-eweta ya | Ezi obi
Methyl Ketone nke Cyclopropyl
Ihe Guzosie Nsonaazụ
Ọdịdị Icha aja aja gafere
Ebe na-agbaze ℃ ≥ 100 100.92
Nyocha% ≥ 99 99.98
O-Chloroaniline% ≤ Ogbe 0.001
O-Nitroaniline% ≤ 0.1 Achọpụtaghị
M-Phenylenediamine% ≤ 0.01 Achọpụtaghị
P-Phenylenediamine% ≤ 0.01 Ugboro abụọ
o-Phenylenediamine nwere ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ. Enwere ike itinye ya na acid, aldehydes, ketones na ogige ndị ọzọ iji nweta ogige heterocyclic. Ọ nwekwara ike ịmalite ịmịkọrọ aka, polycondensation, nnọchi, na mmeghachi omume diazotization.
Onu ogugu nke o-phenylenediamine bu ihe dika 70% maka ihe ogwu na-egbu ogwu, 10% maka ihe ndi ozo, 5% maka ndi ogwu, na 15% maka mpaghara ndi ozo. N'ime ụlọ ọrụ pesticide, a na-ejikarị o-phenylenediamine emepụta benzimidazoles. Fungicides, dị ka carbendazim, thiophanate, mebendazole, wdg, na ndị nwere usoro mgbanaka benzimidazole aghọwo nduzi maka nyocha na mmepe nke fungicides ọhụrụ. Ngwaahịa ndị nnọchi anya bụ usoro carbendazim dị iche iche na arụmọrụ dị elu; ogige benzimidazole sitere na o-phenylenediamine abụghị naanị iji synthesize fungicides, kamakwa ọ nwere ike igbochi mmetọ plastik ma melite ike resin. Na ụlọ ọrụ ọgwụ, o-phenylenediamine nwere ike iji ọgwụ ọgwụ antipsychotic. Pimoxifen, droperidol, histamine clemizole na ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ anthelmintic bụ ogige benzimidazole, ha niile nwere o-phenylenediamine dị ka akụrụngwa. Ihe mgbakwunye, nke a na-ejikarị eme ihe na-egbochi roba antioxidants MB na MBZ, mana ọnụ ọgụgụ mmepụta anụ ụlọ abụghị nnukwu. N'akụkụ ndị ọzọ, benzotriazole nwere ike ji mee ihe dị ka corrosion inhibitor, leveling gị n'ụlọnga, photosensitive ihe na gbasara nyocha reagent. N'afọ a, ọchịchọ o-phenylenediamine, ọkachasị ọcha o-phenylenediamine dị elu, arị elu ngwa ngwa, ọnụego mbupụ ahụ arịkwaala kwa afọ.
Ojiji: 1,2-diaminobenzene bụ etiti nke agba, ọgwụ ahụhụ, ihe mgbakwunye, ihe ndị na-ese foto, wdg. Ọ bụ dyestuff odo aja aja M. A na-eji ya na imepụta polyamide, polyurethane, bactericides carbendazim na thiophanate, na-ebelata uhie GG, leveling gị n'ụlọnga, antioxidant MB, na-eji na nkwadebe nke Mmepụta, surfactant, wdg
Ihe nkwakọ ngwaahịa: 25kg / kaadiboodu drum
Kpọtụrụ: Shijiazhuang Ezi Chemicals Co., Ltd.
Alice Wang (Onye nnọchiteanya azụmahịa)
Nke gara aga: Amdị
Osote: N, N-dimethylbenzylamine
Methylpiperidine nke Pesticide dị n'etiti